Reny Iray Tsy Mitandro Hasasarana Mitaky ny Rariny Ho An’ireo Nanjavona Tao Kashmir · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 13:27 GMT
Parveena Ahangar. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube an'ny VideoVolunteers.
Lahatsoratra nosoratan'i Madhura Chakraborty ary navoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanana vondrom-piarahamonina media iraisampirenena nahazo loka tao India. Avoaka eto ambany ny dika avy aminy ho ampahany amin'ny fifanekena fiarahamiasa amin'ny Global Voices.
Tena henjana ny mamoy zanaka. Nefa alaivo sary an-tsaina ny tsy fahafantarana izay mety misy azy ireny ary miandry mandritra ny 27 taona. Indray alin'ny 1990 ny tovolahy 17 taona, zanak'i Parveena Ahangar, dia nosamborin'ireo olona avy amin'ny hery ivelan'ny tafika avy ao amin'ny tanànan'i Batamaloo any Srinagar, renivohitry ny fanjakana Indiana ao Jammu sy Kashmir, noho ny fiahiahiana azy ho mpikatroka.
Hatramin'izay i Parveena dia niandry foana ny hahazo izay tena vaovao marina momba izay nanjo ny zanany lahy. Ary tsy irery izy. Manome ny isan'ireo “olona nanjavona” ho maherin'ny 8.000 ny vinavina tsy ofisialy naroson'ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona. Ankoatr'io dia ity no porofo tsy azo lavina momba ny fisianà fasana itambarambe tsy misy fanavahana ao Kashmir mitahiry ny taolambalon'ireo olona maherin'ny 7.000.
Ara-jeografika dia ifampizaràn'i India sy Pakistàna i Kashmir izay Miozolmana no betsaka ao aminy, ary samy nilaza ho tompony avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Roambinifolo tapitrisa no monina amin'ny ilan'i Kashmir Indiana ary maro no maniry hanana fahaleovantena. Hatramin'ny 1989, olona maherin'ny 68.000 no maty nandritra ireo ady sy fitroarana mitsitaitaika etsy sy eroa ary ny famoretana ataon'ny tafika Indiana vokatr'izany. Ankehitriny, io no faritra isan'ny ahitàna miaramila betsaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, ahitàna miaramila maherin'ny antsasaka tapitrisa.
Ilay mpiasa sosialy sy mpifandray amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers, Nadiya Shafi, nitatitra momba ny fanoherana ataon'ireo ray aman-drenin'ireo tsy hita, tarihan'i Parveena:
Tamin'ny 1994, ny fahatapahankevitra tanteraka tao amin'i Parveena hitaky ny rariny dia nitondra ho amin'ny fiforonan'ny Fikambanan'ireo Ray Aman-drenin'ireo Tsy Hita (APDP). Nandeha tany amin'ireo faritra ambanivohitra faran'izay lavitra tao Kashmir i Parveena mba hitady ireo fianakavian'ny nalaina an-keriny, ny ankamaroany dia fakàna an-keriny notanterahan'ny tafika Indiana sy ireo hery ivelan'ny tafika, ary tsy hita intsony mihitsy avy eo. Naneho hevitra izy:
Tsy maintsy navelako ny burqa. Tsy maintsy niatrika fitsaràna aho, nitety ireo toerana miaramila fakàna am-bavany. Tsy azo notanterahana tao anaty burqa izany rehetra izany. Ho an'ny zanako lahy no nanaovako azy.
Iray monja amin'ireo lisitry ny fanimbazimbàna zon'olombelona iampangàna ny fanjakàna Indiana sy ny toby miaramila any Kashmir ny resaka fanjavonana an-terisetra. Kanefa, tsy nisy velively andrana mba hamelàna ny lalàna hanohy ny làlany sy hanao fanadihadiana tsy miankina momba ireo tranga ireo.
Hatramin'ny 1993, ny Mpitondra Teny Manokan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fampijaliana dia nosakànana tsy hiditra tao amin'ilay lohasaha. Manome ny tsimatimanota ho an'ireo olona mitam-piadiana ao anatin'ilay fanjakàna ireo Lalàna manokana momba ny Tafika mitam-piadiana (AFSPA) sy ny Lalàna momba ny Filaminam-Bahoaka (PSA), amin'ny anaran'ny ady atao amin'ireo mpihoko. Omen'ireo lalàna henjana ireo fahefana ireo andiany ireo hitifitra ho faty ; hisambona na iza na iza hatramin'ny ankizy 12 taona, amin-kery ary tsy misy didy fampisamborana; mitsofoka sy misava ny toerana rehetra ary manakana sy misava ny fiara rehetra; mibodo na mamotika fanànana ao anatinà hetsika fanenjehana ny mpihoko; ary mampiditra am-ponja ireo Kashmiris hatramin'ny roa taona tsy misy fitsaràna na vesatra anenjahana azy ireo. Tsy afaka ny hisy fanenjehana, na endrika dingana hafa araka ny lalàna hatao amin'ireo izay miasa eo ambanin'ireo lalàna ireo.
Tsy nisy na tranga iray aza tamin'ireo fanimbazimbàna zon'olombelona tany ampitazonana, manomboka amin'ny fampijaliana ka hatramin'ny famonoana, fanjavonana, fanolànana, ka hoe nisy voampanga nentina notsaraina teny aminà fitsaràna sivily. Taminà raharaha iray tena nalaza be tokoa tato ho ato, natsahatry ny tribonalin'ny tafika ny fanamelohana ho faty ho an'ireo olona dimy avy amin'ny antokon-tafika Rajputana Rifles ao amin'ny Tafika Indiana, ho takalon'ny fampanantenana asa sy tsy famonoana an'ireo olona any amin'ireo vohitra Kashmiri, tamin'ny filazana fa toa fitaka iray idirana an-tsokosoko io ho an'ireo mpikatroka.
Na eo aza ny tsy nahavitàn'ny fitsaràna niatrika ireo hadisoana natao tamin'ny anaran'ny ady amin'ny fampihorohoroana, nitozo hatrany i Parveena, nivezivezy avy any Kashmir nankany Delhi sy Zeneva mba hitaky manoloana ireo rantsana iraisampirenena mpiaro zon'olombelona.
Tsy asa mora ny mamondrona ireo ray aman-dreny, vady, ary ankizy zanak'ireo nanjavona manerana ilay lohasaha. Avy aminà fianakaviana tantsaha sahirana ny ankamaroan'ireo havana, mazàna tsy afaka akory maka mpisolovava sy mpikatroka mpiaro zon'olombelona. Hoy i Parveena :
Mazàna izy ireo no nampitahorina tsy hameno ireo taratasy Tatitra Torohay Voalohany (FIRs) ary tsy handrakitra ireny tranga ireny mihitsy koa ny polisy. Nomeko toky izy ireo fa tsy hisy na inona na inona hanjo azy ireo, ary ho eo anoloan'izy ireo hatrany aho, ary ilaiko ho eo an-damosiko ry zareo. Nandeha hatrany Delhi aza izahay ary nanao hetsi-panoherana sy nanao fitokonana tsy misakafo teo amin'ny tsangambato Jantar Mantar.
Nahatonga azy natolotra hifaninana hahazo ny Loka Nobel ho amin'ny fandriampahalemana tamin'ny 2005 ny asa ffikatrohany sy ny filaminany. Mitohy mihazona mafy ny tanjony i Parveena:
Natao ho an'ny tafika irery ve ny lalàna, ny [Tafika Mpiaro Sisintany], ny Special Tasks Force? Manolotra onitra 100.000 ropia Indiana [1.540 dolara amerikàna] ho azy ireo ry zareo. Tsy ilainay ny volany. Ny hiverenan'ny zanakay no tadiavinay.
Nanao sonia fa tsy nanamafy ny fifanekena iraisampirenena ho fiarovana ireo olona rehetra tsy hiharan'ny fanjavonana an-terisetra i India. Miaraka amin'ny fikatrohany tsy ahalalàny sasatra, manantena i Parveena ny hahaforona tsindry iraisampirenena ampy ho an'i India mba handinihana ireo fanjavonana an-terisetra ho toy ny heloka bevava tokony hofaizina.
Video Volunteers no ilay hany tambajotra ao India fanaovana tatitra mifantoka fotsiny amin'ny fanomezana fandrakofam-baovao ho an'ireo distrika mahantra indrindra sy tena tsy hitan'ireo media ao India.